सरकारले अनुमती दिए – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
धनकुटामा होमियोप्याथी शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने
२०७६, २ बैशाख सोमबार २१:३४
धनकुटा २ बैशाख । सरकारले अनुमती दिए धनकुटामा होमियोप्याथी शिक्षण अस्पताल खोलिने जानकारी दिए । पत्रकार महासंघमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जनभावना होमियोप्याथी एण्ड होलिष्टिक अस्पतालका सञ्चालक डा. खगेन्द्र कटुवालले सो सम्बन्धि जानकारी दिएका हुन् ।
डा. कटुवालले भारतमा एक सय ९५ वटा होमियोप्याथी चिकित्सासम्बन्धि अध्यापन गराउने संस्था भएपनि नेपालमा एउटै पनि नहुन दुःखद कुरा भएको बताए । उनले यस सम्बन्धि अध्यापन गराउन धनकुटामा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरिएको जानकारी दिईएको छ ।
डा. कटुवाले सरकारले अनुमती दिए यसै शौक्षिक सत्रबाट कक्षा संचालनमा ल्याईने जानकारी दिए । उनले राज्यको चासो कम भएकोले होमियोप्याथी उपचार विधि नेपालमा पछाडि परेको गुनासो गरे । उनले जर्मनी, फ्रान्सलगायत यूरापीय मुलुक र छिमेकी भारतमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिदै नेपालमा पनि प्राथमिकता दिन प्रदेश सभाका सदस्य निरन राईमार्फत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रदेश सांसद निरन राईले धनकुटामा होमियोप्याथी सम्बन्धि अध्ययन हुनु खुसीको कुरा भएको बताए । उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीसँग पहिलो चरणमा छलफल अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेर यहि आर्थिक वर्षभित्रमा निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
सो छलफल कार्यक्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठले होमियोप्याथी र एलोप्याथी उपचार विधि एउटै अस्पतालबाट उपचार गर्ने गरी लानु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले होमिप्याथीलाई एलोप्याथीको प्रतिस्पर्धीका रुपमा नभई सहकार्य गरी लानु पर्ने बताए ।